Archive du 08-sept-2021
Mr Sayda nisy nitifitra Inona no tena marina ?
Vaovao isan’ny nitana ny sain’ny maro omaly tontolo andro ny hoe: nisy nitifitra teny Ambatobe ny mpanakanto malaza Mr Sayda.
VAHOAKA FRANTSAY 59% MANIRY NY TSY HIROTSAHAN’I MACRON
Ny 59% amin’ny Frantsay nohadihadiana no maneho fa tsy tokony hirotsaka ho kandida intsony I Emmanuel Macron amin’ny 2022, araka ny tsapan-kevitra na Sondage “ViaVoice” nataon’ny “Libération”.
Resy indray ny ekipam-pirenena Malagasy eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra omaly. Tsy afaka hiteny isika hoe: tsy nisy ny ezaka satria na teo aza ny lesoka,
Miharatsy toerana hatrany ny Fitondrana Misintaka sy manao fitan-droa ny ekipa
Miha hafahafa ny tsio-drivotra politika, izay manamafy ny tsy fahamarinan-toeran’ny Fitondrana Rajoelina. Miainga avy ao anatiny ny endriky ny faharavana, izay toa mandeha tsikelikely.
Manamboninahitra vita fiofanana 69 nahavita ny safidy ny vondron-tafika hisy azy
Mpianatra manamboninahitra miisa 69 mianadahy avy ao amin'ny sekoly mampiofana miaramila (ACMIL) Antsirabe no nandray ny andraikiny amin'ny fomba ofisialy
Tsena vaovao Behoririka Omena ny hafa ny karatr’ireo mpivarotra tsy tonga
Nanao fampilazana omaly ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (KAR) fa misy amin’ireo mpivarotra nahazo karatra no mbola tsy nandray ny toerana voatokana
Barean’i Madagasikara Misy tompom-baolina tsy maintsy hajoro ve ?
Lavon’ny Taifas Stars Tanzaniana tamin’ny isa 3-2 indray ny ekipam-pirenena Malagasy omaly tany amin’ny Kianja Benjamin Mkapa ao Dar Es Salaam,
Paul Rabary “Tsy misy fanonganam-panjakana atahorana eto”
Eto Madagasikara tsy misy atahorana fanonganam-panjakana na mety misy manana eritreritra an’izay aza, hoy ny Mpahay fiarahamonina sady minisitra teo aloha Atoa Paul Rabary omaly tao amin’ny fahitalavitra Real TV.
Fivorian’ny filohana parlemantera maneran-tany Manameloka ny fanonganam-panjakana aty Afrika ny Malagasy
Manomboka omaly 7 septambra 2021 ary hitohy anio ny fivoriambe iraisam-pirenena andiany faha-dimy ho an’ireo Filohan’ny Parlemanta maneran-tany, izay atao any Vienne, Autriche.
Fisokafan’ny Analamanga Park Mponina eny an-toerana ihany no alaina hiasa
Ho fanomanana ny fisokafan'ny Analamanga Park afaka andro vitsy, izay voatery nahemotra volana maro,
Taxibe an’Antananarivo Efa maro ireo mampiasa seza afovoany
Tapitra tanteraka ny hamehana ara-pahasalamana eto amintsika nateraky ny fiparitahan’ny valan’aretina Covid 19.